Akwụkwọ 16 Ernest Hemingway Ka akwadoro onye edemede edemede na 1934 | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ 16 Ernest Hemingway tụrụ aro ka otu onye edemede na-eto eto na 1934
Arnold Samuelson, nwa okorobịa nta akụkọ dị naanị afọ iri abụọ na abụọN’ịbụ onye kpebisiri ike na ihe na-akpali akpali, ọ malitere njem dị ukwuu site na mba ya mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ mahadum ya. Ọ kwakọtara ihe ole na ole dị mkpa n’akpa uwe ya na violin ya, rekwa ọtụtụ akwụkwọ akụkọ n’obodo ahụ ka o nyere ya aka gawa njem ahụ. Mgbe ọ laghachiri na Minnesota, na Eprel 1934, ọ gụrụ na nke mbụ a obere akụkọ site n'aka Ernest Hemingway na akwụkwọ akụkọ -ekwo ekwo. Aha akụkọ a na - ekwu maka ya "A njem n'akụkụ nke ọzọ", nke ga-emesị bụrụ akụkụ nke akwụkwọ akụkọ ya "Inwe na inweghi."
Obi dị nwa okorobịa ahụ ụtọ mgbe ọ gụrụ akụkọ ahụ nke na ọ dịghị ihe ọzọ ọ ga-eme ma ọ́ bụghị ịmalite njem nke karịrị kilomita 2.000 na-akụ, ka o wee nwee ike ịhụ Hemingway ma jụọ ya maka ndụmọdụ.
Arnold Samuelson enweghị ihe a sịrị na ọ ga-adị mfe ma dịkwa mfe. Nzọụkwụ site na Florida ruo Key West ima elu si ụgbọ okporo ígwè zụọ na ịkwụsị a n'ọdụ ụgbọ mmiri na-ehi ụra na-emeghe. Ihu igwe, ka o mechara kọọ, adịchaghị mma. Ọ dinakwara na pen pen ụlọ mkpọrọ, nke ọ na - ekwu na ọ na - ebute anwụnta. N’agbanyeghi ihe a niile, onweghi ihe wepụrụ mkpebi ya na ịnụ ọkụ n’obi ya izute onye ahụ n’oge ahụ bụ onye ode akwụkwọ kachasị amasị ya, dịkwa njikere ịpụta n’ọnụ ụlọ ya. Samuelson kọrọ ya dị ka nke a:
Mgbe m kụrụ aka n'ọnụ ụzọ nke ụlọ Ernest Hemingway na Key West, ọ pụtara wee guzo n'ihu m, dị oke njọ na iwe, na-eche ka m kwuo okwu. Enweghị m ihe m ga-agwa ya. Apụghị m icheta otu mkpụrụ okwu m kwadebere. Ọ bụ nwoke toro ogologo, toro ogologo, ubu ya gbadara agbada, guzoro n'ihu m ụkwụ ya abụọ kụrụ na aka ya na-agbada n'akụkụ ya. Ọ makpuru ntakịrị ihu site na mmetụta ebumpụta ụwa nke onye na-akụ ọkpọ dị njikere ịkụ ọkpọ.
Onye edemede ahụ jụrụ ya ihe ọ chọrọ kpọmkwem, nke onye edemede ahụ na-eto eto zara na ọ gụọla obere akụkọ ikpeazụ ya bipụtara -ekwo ekwo na ọ masịrị ya nke ukwuu, na ọ nweghị ike izere ịga izute ya iji soro ya kparịta ụka. Hemingway na-arụsi ọrụ ike n'oge ahụ, mana ọ na-eji nwayọ ma na-egosipụta olu ọma kpọrọ ya ka ọ bịa n'ụlọ ya n'echi ya.
N’echi ya ha malitere ịkparịta ụka na mgbe Arnold Samuelson kwupụtara na ya amaghị etu esi ede maka akụkọ ifo, onye gbalịrị n’enweghị ihe ịga nke ọma, Ernest malitere inye ya ndụmọdụ:
"Ihe kacha mkpa m mụtara banyere ide bụ ka ị ghara ide ọtụtụ oge n'otu oge," ka Hemingway kwuru, jiri mkpịsị aka ya metụ ogwe aka m. Gaghị eme ya otu oge. Hapụ ụfọdụ maka echi. Ihe kachasị mkpa bụ ịmara mgbe ịkwụsị. Mgbe ịmalitere ịde ihe na ihe niile na-aga nke ọma, bịa ebe na-atọ ụtọ ma mgbe ị matara ihe ga-eme ọzọ, nke ahụ bụ oge ịkwụsị. Mgbe ahụ ị ga-ahapụ ya ka ọ dị ma ghara iche maka ya; hapụ ya zuru ike na uche gị uche mee ndị ọzọ. N’ụtụtụ echi ya, mgbe i hiri ụra nke ọma wee zuru ike, degharịa ihe ndị i dere n’ụbọchị gara aga ruo mgbe ị garuru ebe ahụ dị mma ị maara ihe ga-eme ọzọ. Dee ọzọ ma megharịa usoro ahụ ọzọ, na-ahapụ ya na ebe ọzọ ga-adọrọ mmasị. Were gabazie. N'ụzọ ahụ, isiokwu gị ga-ejupụta na ebe ndị na-adọrọ mmasị. Ọ bụ ụzọ iji dee akwụkwọ akụkọ anaghị ada ada ma na-atọ ụtọ ka ị na-aga. "
Ernest Hemingway, n'etiti ndị ọzọ, dụrụ nwata ahụ ọdụ ka ọ ghara ilekwasị anya na ndị edemede nke oge a. Dị ka onye edemede ukwu ahụ si kwuo, ị ga-asọmpi na ndị ochie, na ndị edemede ugbu a nwụrụ anwụ, nke dika ya si di bu ndi mere oru ya iguzogide oge. Onye edemede ahụ kpọrọ Arnold ka ọ bịa n'ụlọ ọrụ ya. Ọ na-akọwa ahụmahụ ya na ya dị ka ndị a:
Ihe omumuihe ya bu ebe nleba anya na azu ulo. M sooro ya rịa na steepụ dị n'èzí nke ụlọ akwụkwọ ahụ, nke bụ ọnụ ụlọ nwere akụkụ anọ, nke nwere okpukpu okpukpu ma mechie windo ya na mgbidi atọ na shelf ogologo nke akwụkwọ n'okpuru windo ala. N’otu akụkụ ya, e nwere nnukwu tebụl ochie nke nwere mbadamba dị larịị na oche ochie nke nwere azụ dị elu. EH weghaara oche n'akụkụ nkuku ma anyị nọdụrụ n'akụkụ ibe anyị n'akụkụ abụọ nke tebụl ahụ. O weere mkpịsị odee wee malite ide ihe na mpempe akwụkwọ. Nkịtị ahụ dara jụụ. Achọpụtara m na ọ na-eji oge ya ede ihe. Ọ ga-amasị m ka ya jiri obi ụtọ ya nabata m, mana m mechara mechie ọnụ m. Anọ m ebe ahụ iwere ihe niile ọ ga-enye m na ọnweghị ihe ọzọ.
Ihe Ernest Hemingway na-ede bụ ndepụta nke akwụkwọ akụkọ 14 na akụkọ 2 nke ọ tụrụ aro ka nwatakịrị ahụ gụọ. Ndị a bụ akwụkwọ iri na isii Ernest Hemingway tụrụ aro ka onye edemede na-eto eto na 16:
"Anna Karenina" nke Leon Tolstoy dere.
"Agha na udo" nke Leon Tolstoy dere.
"Nwanyị Bovary" nke Gustave Flaubert dere.
«The-acha anụnụ anụnụ nkwari akụ» nke Stephen Crane dere.
"Opengbọ mmiri ahụ mepere emepe" nke Stephen Crane dere.
Ndị Dublin nke Jame Joyce dere.
"Red na Nwa" nke Stendhal.
"Servgba ohu" nke Somerset Maugham.
Ndị Buddenbrooks by Thomas Mann.
"Tere aka na ogologo oge gara aga" nke WH Hudson dere.
"Onye America" nke Henry James dere.
"Ekele na ekele" (Ekele na ezumike) nke George Moore dere.
"Karamụnna Karamazov" nke Fyodor Dostoyevsky dere.
"Nnukwu ụlọ ahụ" by Onyeka Onwenu
Wuthering elu nke Emily Brontë dere.
"Akwụkwọ Oxford nke Bekee Amaokwu" nke Sir Arthur Thomas dere.
Ernest Hemingway Ederede Biography
Mgbe ahụ anyị hapụrụ gị vidiyo nke akụkọ ndụ Ernest Hemingway. Ọ bụ akụkọ ndụ zuru oke (vidiyo ahụ dị ihe dị ka otu awa na ọkara) nke ọ bụghị naanị ndụ na ọrụ nke onye edemede ka a na-enyocha, kamakwa onye edemede na otu onye edemede ibe ya na-ekwu okwu.
Okwu Ernest Hemingway na Quotes
Na njedebe nke ederede a ogologo oge, nke na-atọ ụtọ, kpochapụwo, ụfọdụ ahịrịokwu na amaokwu ndị ama ama kwuru site n'aka ya onwe ya:
"Ndị ezigbo mmadụ, ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya ntakịrị, na-enwekarị obi ụtọ."
Zọ kachasị mma iji chọpụta ma ị ga-atụkwasị mmadụ obi bụ ịtụkwasị ha obi.
"Ugbu a: okwu chọrọ ịmata ụwa niile na ndụ ya niile."
Emekwala ihe ị na-achọghị ime. Ya adịla mgbe ị na-emegharị mmegharị na omume.
Na-anọ mgbe niile n’azụ nwoke ahụ na-agbapụ agbapụ na n’ihu nwoke ahụ na-agba ọsọ. N'ụzọ ahụ, ị ​​ga-enwe nchebe pụọ na mgbọ na na na.
«Ọ bụrụ na anyị merie ebe a, anyị ga-emeri ebe niile. Iswa bụ ebe mara mma, ọ bara uru ịgbachitere ya ma akpọrọ m asị ịhapụ ya.
"Echekwala na agha, n'agbanyeghị etu o si dị mkpa ma ọ bụ zie ezi ọ nwere ike iyi, abụghịzi mpụ."
"Gbalịa ịghọta, ị bụghị agwa nke ọdachi."
"Enwere m mmetụta nke ọnwụ nke ọnwụ na-abịa na njedebe nke ụbọchị ọ bụla nke ndụ mmadụ lara n'iyi."
"Mgbe ha na-anụ ụda olu, ọtụtụ kwenyere na ụda na-esi na ya."
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Akwụkwọ 16 Ernest Hemingway tụrụ aro ka otu onye edemede na-eto eto na 1934
M. daashi dijo
Ezigbo nyocha. Enwere m ohere nke ịkọ ya.
Vidio ahụ na-atọ ụtọ nke ukwuu, m na-adabakwa na ndụ m na echiche nke onye odeakụkọ na onye edemede a pụrụ iche n'otu oge ahụ.
O bu ihe nwute na ndi ntorobia taa amaghi oru nke onye ode akwukwo a.
Zaghachi M. Bono
Bụ onye amụrụ na narị afọ nke iri na itoolu bụ isi ihe ka ọ ghara ijide nhichapụ nke oge ahụ, dị ka ị smokingụ sịga ma ọ bụ ị drinkingụbiga mmanya ókè, nke bụ oke nwoke. Obi abụọ adịghị ya, nwoke nwere ọtụtụ omume ọma na ụfọdụ ntụpọ ndị ọzọ. Akwa na enweghi ike ikwughari ya.
Zaghachi José Antonio González Morales
Akụkọ mkpirikpi banyere Pío Baroja